The Voice Weekly Interviews Joshua Chit Tun on #NextGenLeaders and U.S. Politics - The #rebelsenator - .LA
The Voice Weekly Interviews Joshua Chit Tun on #NextGenLeaders and U.S. Politics
Published by May Phyo Khaing on April 12, 2016 at 10:51pm in Highlights (In Burmese)
၁။ လက်ရှိမှာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးဗျ။
လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတဲ့ Brain Child Creative Group, မှာပါဝင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံတဲ့ အဆင့်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး အခုကတော့ အကူးအပြောင်းအဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ သူရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲလေးတွေ (ဥပမာ Boogiezone) မှာ C.E.O အဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီး သူတို့ရဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
အခြားဖွံ့ဖြိုးလာမယ့် ကုမ္ပဏီလေးတွေလည်းရှိပါဦးမယ် ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက သုံးလကနေ ခြောက်လလောက်အတွင်းမှာ အဲဒါလေးတွေဟာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ပိုမိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီကုမ္ပဏီလေးတွေဟာ အကျိုးအမြတ်ရဖို့နဲ့ ကျင့်ဝတ်ညီညွတ်သော ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့အတူရှိနေတာပါပဲ။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲ ကျွန်တော့်ကို မောင်းနှင်နေတာပါ။ အဲဒါအပြင် ကျွန်တော်နဲ့လူငယ်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေက ရွှေ့ပြောင်းအိမ်ခြေယာမဲ့တွေအတွက် လည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ခြေယာမဲ့တွေကို ကြည့်ရတိုင်း စိတ်မချမ်းသာပါဘူး၊ ကျွန်တော်အမေရိကမှာ အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ အိမ်ခြေယာမဲ့တွေဟာ အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများမှာရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဲလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့ အဲလိုဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဘေးအန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက တုံပြန်ဆောင်ရွက်မှုနိုင်မယ့် အရည်အချင်းတွေရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကျောင်းသားတွေကနေမှတဆင့် ကွန်ယက်တွေချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီး စနစ်ကျတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မှာပါ။ @ ICA Displaced Initiativeမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပိုမိုအကျိုးရှိတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု
၂။ အိပ်ရာထတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ပါသလဲ၊ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာတွေပေါ့နော်၊ ပြီးတော့ ဘာတွေကို ဝါသနာပါပါသလဲ။
ကျွန်တော်အိပ်ရာထတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ email တွေကို စစ်တာပါ။ STUDENTdirect's Mentorship Program မှာ ကျွန်တော်ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော် လမ်းညွှန်ပေးရတဲ့ အဖွဲ့တွေ (ဥပမာ ERHS Initiating Community Action.) ရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို email ကနေတဆင့် အမြဲတမ်းစာတွေပို့ပေးနေရပါတယ်။
အဲဒီအရာတွေက ကျွန်တော့်ကို အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကျောင်းပေါင်းစုံ ၊ အစီအစဉ်ပေါင်းစုံ ကို အကြံပြုချက်တွေပေးရတာပါ။ များသောအားဖြင့်က ကျွန်တော့်ဖုန်းကနေပဲ ပေးပို့လေ့ရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းကျွန်တော် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဖို့ကြိုးစားသလို တစ်ဖက်ကလဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကျွန်တော့် facebook ကနေလာတဲ့ စာတွေကို စစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင် အကောင့်မှာ စာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ကို တိုက်ရိုက်စာပြန်ပါတယ်။ အများစုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကပါ။ အဲဒါကတော့ မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော်လုပ်လေ့ရှိတာတွေပါ။ အချို့နိုင်ငံတွေနဲ့က အချိ်န်ကွာခြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလည်း ကျွန်တော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပေးပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ Conference call ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်နားရတယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။
ဝါသနာဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကတာတွေ၊ ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်တာတွေ သဘာဝအရသာ ခံစားတာတွေ၊ ခရီးရှည်ကားမောင်းတာတွေ လုပ်တယ်လို့ အမြဲစိတ်ကူးပါတယ်။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ဖူးပါသလား၊ မြန်မာစကားကောပြောတတ်ပါသလား၊ အစ်ကို့အဘိုးက မွန်လူမျိုးလား ဒါမှမဟုတ် ဗမာလူမျိုးလား။
ကျွန်တော့်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ တိတိကျကျပြောရရင် ရန်ကုန်မှာပါ။ ကျွန်တော့်အသက် ၅ နှစ်မှာ ကျွန်တော် အမေရိကကို ပြောင်းလာခဲ့တာပါ။ ဒီရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားသင်ကြားရတော့ ကျွန်တော့်မိခင်ဘာသာစကားကို ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်က မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဂီတ၊ မြန်မာစကား စတာတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှအပတွေက ကျွန်တော့ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကျွန်တော့်ကိုဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဘိုးက မွန်ပြည်နယ်က ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အစ်ကို့ရဲ့တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်မှာ အချိ်န်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အစ်ကို ပြောသလိုကော လုပ်ဖြစ်ပါသလား။
လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝါသနာတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးအာရုံနဲ့ အိပ်ချိ်န်တွေမှာ ရှိတာပါ။ ကျွန်တော်က စည်းကမ်းကလနားနဲ့နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Online ကနေသင်ကြားတဲ့ အက ဗီဒီယိုတစ်ခုကို တစ်နာရီလောက်အချိ်န်ပေးပြီးကြည့်ရုံနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အထောက်အကူများစွာဖြစ်စေသလိုပဲ ကိုယ်ခံပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချိ်န်ဇယားအရလဲ အဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် က ကမ်းခြေတွေရဲ့ ပုံတွေကြည့်ပြီး သီချင်းနားထောင်ရတာကိုလဲကြိုက်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းက အံ့သြဖို့တော့ ကောင်းတယ်ဗျာ
ကျွန်တော့်အဖိုးကို ဂုဏ်ယူသောအားဖြင့် အဖိုးကစားခဲ့တဲ့ Barbell Exercises by Chit Tun ကို လေ့ကျင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
၅။ အစ်ကိုအမေအကြောင်းပြောပြပေးပါလား၊ အစ်ကိုအတွက် ဘယ်လိုအမေမျိုးဆိုတာရယ် အခြားမိသားစုဝင်တွေသူမအပေါ်မှာ ထားတဲ့အမြင်လေး ပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော့်အမေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ မသိပါဘူး၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှ ပိုပြောနိုင်မယ်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော့်အဖေမိသားစုသတ်မှတ်တဲ့ သူမတန်ဖိုးကတော့ ကျွန်တော့်ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တာပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက အမေက ကျွန်တော့်ရဲ့ခွန်အားပါ၊ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပိုတော်တဲ့ချစ်ထွန်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာ သူမကြောင့်ပါ။ အမေက ရှမ်းပြည်နယ်ကပါ၊ အမေရဲ့ အချိ်န်တော်တော်များများကို ကျွန်တော့်အဖေမိသားစုနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။ အဲဒါကလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး၊ သူမအနေနဲ့ ပညာတတ်မဟုတ်ပေမယ့် သူမလမ်းကြောင်းအတွက်သူမ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်က လူသားပိုဆန်တဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ အဲဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုကြိုးစားစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဆင်းရဲတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းတစ်ဦးအပါအဝင်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်အဖေမိသားစုက ကျွန်တော့်ကို သာမန်သူဆင်းရဲ ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ဆက်ဆံပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေကို လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့အမေက မွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကလည်း ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်ပါပဲ၊ ကျွန်တော့်ကို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီး အထက်တန်းလွှာမိသားစုဖြစ်တဲ့ ချစ်ထွန်းမိသားစုက ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တာပါ။
၆။ အဲဒါဆိုရင် ကလေးဘဝတုန်းက သိမ်ငယ်မှုတွေခံစားခဲ့ရမှာပေါ့။
ကျွန်တော်ကလေးဘဝကတည်းက သိမ်ငယ်မှုဆိုတာကို မခံစားခဲ့ပါဘူး၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ကျင့်ခံရပြီိဆိုရင် အဲဒါတကယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ထားတယ်။ သိမ်ငယ်မှုတော့မရှိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးစေချင်တဲ့ ခံစားချက်တော့ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုအခြေခံပြီး ကျွန်တော် လူငယ်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ရဲ့ အချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ နဲ့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ အိပ်မက်စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ မြင့်မြတ်တဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ ရှင်သန်မှုမှာလည်း အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေထဲက မင်းသားလေးတစ်ယောက်လို လိုတရမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာ ညအိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေနဲ့ အခြားတိုင်းနယ်ခြားက ပုံပြင်တွေက ဖမ်းစားမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြံပေးတွေ ကျွန်တော့်ကိုသတိပြုမိစေတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ကို သွေးနှောမင်းသားလို့ခေါ်ကြတာပါပဲ။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပုံစံပါပဲ။ အမှန်တရားဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရယ်မောဖွယ်ရာတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
၇။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဗျ။
မြန်မာအစားအစာတွေထဲမှာဆိုရင် မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ လက်ဖက်သုပ် က ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အချိုပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကြိုက်တာတွေတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် နာမည်တွေကို သိပ်မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်အမေက မြန်မာဆိုတော့ ကျွန်တော် အမေ့ဆီသွားတိုင်း သူမက မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်သုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကျွေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ California မှာလည်း မြန်မာအစားအစာတွေရတဲ့ ဆိုင် ၄ ဆိုင်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့် facebook မှာ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အဲဒီဆိုင်တွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါတယ်။
၈။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေကိုကော သိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိထားတာတွေရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာအများစုဟာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ကြတာတွေလည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုက တစ်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် တစ်ခုခုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အမေရိကမှာ ဘယ်လောက်အောင်မြင်အောင်မြင် ကျွန်တော့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
အခြားသတင်းဌာနတစ်ခုက သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်ချက်လို့ သုံးနှုန်းသွားပါတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့်ကို အတွေးတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်ထပ်သိလိုက်ရတာက ကျွန်တော်အများကြီးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ငွေကြေးအတွက်ပဲ ကြည့်တဲ့ အသပြာနိုင်ငံမှာနေရတာ ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ပင်ပန်းလွန်းတယ်။ ကျွန်တော် လူသားဆန်တဲ့လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်ချင်တာပါ အဲဒါက ကျွန်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားလှတဲ့အနာဂတ်ကို ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဘယ်လောက်ပဲ လက်တွေ့မဆန်ဘူးပြောပြောတစ်နေ့မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ အများအတွက်အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှမှာ အခက်အခဲတွေကို ကျွန်တော် ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ လူသားဆန်မှုနဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေမှာ မြင့်မြတ်မှုတွေတွေ့မြင်နိုင်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့သာ သူတို့တွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးလိုအပ်နေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေဖြစ်လာမှာပါ။
၉။ ကို Joshua အနေနဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစ်ကိုရဲ့ လှုံ့ဆော်အားပေးမှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲမသိဘူး။
ကျွန်တော် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် တစ်ယောက်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ လိုအပ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက ကျွန်တော်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် အဲဒါက အလေးထားဖွယ်ရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကရဲ့ အငယ်ဆုံးအထက်လွှတ်တော်အမတ် ဆိုတဲ့ စကားကိုပြောကြည့်ရုံနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုမိုရှင်သန်စေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ဖတ်ဖူးတယ်လေ့လာဖူးမယ်ဆိုရင် လူတွေဟာ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည် သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေက အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကို စိန်ခေါ်နိုင်မယ့် အပြောင်းအလဲ တစ်ခုဖြစ်လာဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။
ကျွန်တော့်အတွက် လှုံ့ဆော်မှုတွေဘာလဲဆိုတော့ သမိုင်းဝင်ထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲအတွက်ပါ။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေကလည်း သမားရိုးကျ အယူအဆတွေကို ဖယ်ရှားလာနိုင်ပြီး သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ စနစ်တွေကို စိန်ခေါ်လာနိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်စေဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားယူရပါလိမ့်မယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါက လူ့လောက လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့အများကြီး ပြောနိုင်တာတွေရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်တာတွေက အဆင့်ဆင့် တွက်ချက်ထားပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ကတည်းက အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေ၊ အကြံပေးတွေ၊ အခြားတစ်သီးပုဂ္ဂလနိုင်ငံရေးကော်မတီတွေနဲ့ ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်အရွေးခံဖြစ်တာပါလဲ။ အစ်ကို့အနေနဲ့ လူငယ်တွေ၊ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ အဲဒါတွေကကော ဘာကြာင့်ပါလဲ၊ အကယ်၍ အစ်ကို့အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား။
ပထမရွေးကောက်ပွဲမှာ ကတော့ အရင်းအမြစ်နည်းနည်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖုိ့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အသာပေးပြီး မှန်မှန်လေးနဲ့သွားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က R.A.A (Relatable, Accessible, Accountable) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တာ၊ နားလည်ရလွယ်ကူတာ၊ တာဝန်ခံယူမှုရှိတာမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ပထမရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဗျူဟာကတော့ ယုတ္တိမရှိဘူးလို့တော့ ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်ပါတယ်။ အချိ်န်ကျရင် သမိုင်းအထောက်အထားတွေကပဲ သက်သေပြသွားပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက အခြားသူတွေလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မဲပေးသူတွေအဖြစ်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်ကို ပါတီအသစ်တစ်ခုနဲ့ ထိတွေ့မိတ်ဆက်ခွင့်ပေးမယ့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့တွေကို မြင်တွေ့ခံစားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အမေရိကမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ ခေါင်းဆောင်နိုင်မယ့် စွမ်းအားရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့မပြီးမြောက်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကို အခြားလူငယ်တစ်ယောက်က အခြေနေအရပ်ရပ်ကိုနားလည်မှုရှိစွာနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလူငယ်ဟာ သေချာပေါက် အမတ်တစ်ဦးဖြစ်လာပါလ်ိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ ပထမရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါ။ ဒုတိယရွေးကောက်ပွဲအတွက်တော့ ကျွန်တော့် ပုဂ္ဂလပါတီအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ သီးသန့်ပါတီတစ်ခုတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပါတီဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
ကျွန်တော့်ကို ချစ်ထွန်းမိသားစုဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ ရှုံးနိမ့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချစ်ထွန်းတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေလာခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီစိတ်က ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကိန်းအောင်းတည်ရှိနေတဲ့စိတ်ပါ။
၁၁။ ရင်းနှီးရတဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေကော ရှိပါသလားခင်ဗျ
ရှိပါတယ်ခင်ဗျ Raymond Thu လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူကလည်း အောင်မြင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတစ်ယောက်ပါ။
၁၂။ ကို Joshua ရဲ့ လူငယ်တွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့အမြင်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ လူငယ်ဆိုတာ အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေပါ။ သူတို့အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေရှိမယ် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိမယ်၊ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်ရှိအောင် နည်းစနစ်ကျကျ လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်မယ့် နည်းပေးလမ်းပြသူတွေရှိဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သာဓကတွေကို အာဖရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အနောက်ဥရောပ နဲ့အာရှတိုက်က နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က အခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မတူတာက လူငယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို လူအများနားထောင်ကောင်းရုံ၊ ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးစေရုံ သက်သက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော် CEO အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အားထုတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ STUDENTdirect Charitable Foundation ကနေ မကြာသေးခင်က အနားယူခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ အသက် ၁၈နှစ်သာရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေး Cameron Coe ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လိုပဲ အခြားတာဝန်အသီးသီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူတွေထဲမှာ ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ် ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေလည်းပါပါတယ်။
၁၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီပေါ်မှာ အစ်ကိုရဲ့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုအမြင်မျိုးရှိပါသလဲ။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ကျွန်တော် အမေရိကန်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံး လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ မဟာဗျူဟာကျတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာပေါ့။ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ပုံစံ သဘော သဘာဝတွေ နဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီး ဖန်တီးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ကင်းကွာပြီးနေခဲ့ရတာကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ သူမရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခံစားမိတာနောက်တစ်ခုက မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ဦးဆောင်ရတော့မှာပါ အစိုးရသစ်ကို ဖန်တီးပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်ရတော့မှာပါ။
အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ချင်ပါတယ်။ လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရှိနေခြင်း၊ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခြင်း။ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံကို ကူညီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကြီးက အရမ်းကို ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသွားပါလ်ိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကမှာ ကွဲပြားမှုတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ အချို့ ဂျာနယ်သမားတွေက အစ်ကိုကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဒါမဟုတ် သူရဲကောင်းလို့ ပြောကြပါတယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့ကော အဲဒီအပေါ်မှာ ဘာများပြောချင်တာရှိပါသေးလဲ။
ကျွန်တော့်အတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ လူငယ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ သြဇာတိက္ကမရှိတဲ့ လူတွေဖြစ်အောင်ကူညီဖို့ပါပဲ အဲဒါကတော့ ညစဉ်ညတိုင်းကျွန်တော် အမြဲချင့်ချိန်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်က သာမန်လူသားတစ်ယောက်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ STUDENTdirect Charitable Foundation က Bola-Ige Alabi Efeshodiamhe ဆိုတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူ့မှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူ့ကို နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအဖြစ်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူငယ်တွေကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလို့ မှတ်ယူထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်က သူရဲကောင်းတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ စတာတွေအားလုံးအတွက် အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်က နောက်လိုက်တစ်ယောက်သာသာပါပဲ၊ အဲဒါတွေကပဲ ကျွန်တော့်စိတ်ကို မောင်းနှင်ထားပြီး ကျွန်တော်နှလုံးသွေးကိုရှင်သန်စေတဲ့အရာတွေပါ။ ကျွန်တော်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှု ပြင်းထန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည်နိုင်မှုစွမ်းအင်ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၅။ ကျွန်တော် အစ်ကို့မိသားစု နောက်ကြောင်းတွေကို ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါပေမယ့် အစ်ကိုကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့ အစ်ကို့မိသားစု အကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ မိသားစု နောက်ခံ အခြေအနေတွေကို ပိုပြီးသိရှိနားလည်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီlink (http://www.younginc.la/startups/support-jc-and-your-nextgenleaders/press-releases/origins-define-a-future) မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁၆။ အစ်ကို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ ရှိရင် ဘယ်တော့လောက်လာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Tags: international media, #rebelsenator, interviews